2 Makabeo 6 - Ny Baiboly
2 Makabeo toko 6
Ny natao hampiditra ny fomba greka amin'i Jerosalema sy ny manodidina azy - Ny namonoana an'i Eleazara noho ny firaiketam-pony amin'ny lalàna.
1Andro vitsivitsy taorian'izany, dia naniraka anti-dahy anankiray avy any Atena ny mpanjaka, hanery ny Jody handao ny fivavahan-drazany sy hisakana azy tsy hiaina araka ny lalàn'Andriamanitra, 2ary handoto ny tempolin'i Jerosalema hanokana azy ho an'i Jopitera Olimpiana, ary ny tempoly any Garizima, ho an'i Jopitera Mpandray vahiny, araka ny toetry ny mponina amin'izany tany izany. 3Namohehatra sy tsy hay leferina mihitsy, ny nidiran'izany loza izany, na dia ho an'ny ankapobem-bahoaka aza; 4satria ny tempoly nataon'ny jentily karandahy sy karambavy, feno filerana amam-pahavetavetana, niray tamim-behivavy teo amin'ny kianja masin'ny tempoly ny lehilahy, sady nitondra ny zavatra voarara, ho eo; 5ny otely aza rakotra sorona natao tamin'ny zavatra maloto, voararan'ny lalàna. 6Tsy azo natao intsony ny mankalaza ny sabata, na ny fety fanaon'ny razantsika, na ny milaza tena fotsiny hoe Jody aza. 7Voatery ny Jody ka nangidy taminy izany, ny ho any amin'ny sorona fanao isam-bolana, amin'ny andro nahaterahan'ny mpanjaka; amin'ny fetin'ny Bakanala, noterena izy hamindra any an-dalambe, voaisy fehiloha liera, ho fanajana an'i Bakosa. 8Nisy didy navoaka noho ny famokisana nataon'i Ptolemea mba hampihatra izany hevitra izany ihany koa amin'ny Jody ao amin'ny tanàna greka manolotra azy, sady hanao sorona; 9ary nasaina novonoina ho faty izay mandà tsy hanaraka ny fanao greka. Ka nampalahelo loatra ny zavatra niseho hitan'ny maso. 10Ohatra, nisy vehivavy roa namora ny zanany, dia nosamborina nahantona tamin'ny nonony ny zanany, notaritarihina am-pahibemaso eran'ny tanàna, dia navarina avy eny an-tampon'ny manda. 11Nisy koa niara-nankany amin'ny zohy akaiky, hankalaza an-tsokosoko ny andro sabata, fa voampanga tamin'i Filipo, ka nodorana tao, tsy sahy niaro tena akory, noho ny fanajana ny fahamasinan'izany andro izany.
12Mihanta amin'izay hahazo ity boky ity ho eo an-tànany aho, mba tsy hety ho sanganehana noho izany loza izany; fa aoka hino izy, fa tsy ho fandravana fa ho famaizana ny firenentsika no nisian'ireo fanenjehana ireo. 13Raha tsy avelan'Andriamanitra hitoetra ela tsy voasazy ny mpanota, fa ampidininy faingana amin'izy ireo ny famaizana, dia mariky ny hatsaram-po lehibe izany. 14Ary tokoa, fa raha hamay ny firenen-kafa ny Tompo lehibe indrindra, dia andrasany amim-pandeferana izay hahatratrany ny farafetran'ny haratsiana; fa tsy toy izany kosa no ataony ho tokony hitondrana antsika, 15mba tsy hisy tokony hamaliany ratsy ny nataontsika, rahefa hahatratra ny fara-fetrany ny fahotantsika. 16Hany ka tsy manala ny famindram-pony amintsika izy na oviana na oviana; tsy mahafoy ny vahoakany izy, na mamay azy amin'ny fahoriana aza. 17Ampy ho anay ny mampahatsiaro izany zava-marina izany, ary manaraka izany teny vitsivitsy izany, dia tokony hiverina amin'ny filazanay ny tantara izahay.
18Eleazara iray amin'ireo mpampiana-dalàna ambony, izay lehilahy efa nandroso taona, sy niendrik'andriana indrindra, dia nosokafana an-keriny ny vavany noterena hihinan-kenan-kisoa. 19Kanefa naleony maty be voninahitra toy izay velona ho olo-meloka; naloany ny hena, dia nandroso an-tsitra-po ho any amin'ny fampijaliana izy; 20toy ny tsy maintsy androsoan'izay manan-kerim-po handoa ny voarara tsy hohanina, noho ny fitiavana ny aina. 21Nifankahazo tamin'i Eleazara hatry ny ela kosa, ireo voatendry hitarika izany fisoronana manohitra ny lalàna izany, ka nalainy mangingina izy, novokisany hampaka hena azo hanina sy nandrahoin'ny tenany ihany ary hody hihinana ny hena natao sorona, araka ny nandidian'ny mpanjaka, 22satria rahefa vitany izany, dia ho afaka amin'ny fahafatesana izy, ka hahita soa amin'ny famindram-po ataon'izy ireo noho ny fisakaizany taminy efa ela be. 23Fa izy kosa nandinidinika tamim-pahendrena araka izay nety ny taonany sy ny fanajana ambony tandrifin'ny fahanterany, ampian'ny volony fotsy be voninahitra sy ny toe-piainana mendrika indrindra narahiny hatramin'ny fahazazana, ary indrindra ny lalàna masina naorin'Andriamanitra mihitsy; ka noho izany ny handefasana azy faingana any amin'ny fonenan'ny maty, no navaliny. 24Tsy mety tokoa, hoy izy, raha olona be taona toa anay izao no hoe manafin-kevitra; fandrao dia heverin'ny zatovo maro fa nanaraka ny fombam-pirenen-kafa tokoa Eleazara nony efa sivifolo taona. 25Amin'izany izy ireo, noho ny fanafenako hevitra, sy noho ny sisam-piainan-mandalo, dia ho diso làlana; ka ho voatototra henatra amam-pahafaham-baraka ny fahanterako. 26Ary na ho afaka amin'ny sazin'olombelona fe ankehitriny aza aho; tsy ho afa-mandositra ny tànan'ilay mahefa ny zavatra rehetra, na velona aho na maty. 27Noho izany, raha amin-kerim-po no handaozako ity fiainana ity ankehitriny, dia hiseho ho mendrika ny fahanterako ahay, 28ary ohatra ambony no havelako harahin'ny tanora amin'ny fahafatesana an-tsitra-po sy amin-kerim-po noho ny lalàna mendrika hohajaina sy masina. Vao avy niteny izany izy, dia nizotra nankao amin'ny fiasana famonoana. 29Noheverin'izay nitondra azy hankeny ho hadalana ny teny vao notononiny, ka novany ho halozàna ny fitiavany azy vao nasehony taminy teo. 30Nony efa ho fatin'ny kapoka izy, dia nisento nanao hoe: Ny Tompo manana ny fahalalàna masina no mahita fa rahefa afa-mandositra ny fahafatesana ihany aho, dia miaritra fampijalijaliana mafy amin'ny nofoko, asiana ny langilangy, fa amin'ny fanahiko kosa, mandefitra izany an-kafaliana noho ny fanajako azy. 31Toy izany no namoizany ny aina ka ny fahafatesany nataony tonga oha-kerim-po sy tsangam-baton'ny hatsaram-panahy, tsy ho an'ny tanora ihany, fa ho an'ny vahoaka rehetra koa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0252 seconds